युएस बांग्ला एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ उडान बन्द ! (नेपालमा विमान दुर्घटना को ईतिहास ) – My Blog
Home समाचार युएस बांग्ला एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ उडान बन्द ! (नेपालमा विमान दुर्घटना को ईतिहास )
युएस बांग्ला एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ उडान बन्द ! (नेपालमा विमान दुर्घटना को ईतिहास )
starnews - Mar 14, 20180030
काठमाडौँ- सोमबार दुर्घटनामा परेको युएस बांग्ला एयरलाइन्सले काठमाडौँ उडान अनिश्चितकालीन समयका लागि बन्द गरेको छ।
बंगलादेशी पत्रिका डेली स्टारका अनुसार ७१ जना चढेको युएस बांग्ला एयरलाइन्सको ७१ जना यात्रु चढेको विमान काठमाडौँ विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको दुई दिनपछि एयरलाइन्सले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘ढाका र काठमाडौँबीचको हाम्रो उडान विमानको कमीका कारण बन्द गरिएको छ,’ युएस बांग्ला एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक (सञ्चार मामिला) कमरुल इस्लामलाई उद्धृत गर्दै डेली स्टारले लेखेको छ।
नेपालमा विमान दुर्घटना को ईतिहास
काठमाडौं । नेपालमा विमानको प्रयोग २००६ सालबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो समय नेपाल तथा अन्य देशहरुमा भएका विमान दुर्घटनाका समाचारहरू आइरहेका छन् । आकाशमा उड्ने र अति संवेदनशील भएकोले विमान दुर्घटनापछि ठूलो संख्यामा यात्रुको निधन हुने गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब १ महिना नपुग्दै नेपालमा ५१ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यो दुर्घटना अत्यन्तै ठूलो दुर्घटना हो ।
अहिलेसम्मको इतिहासलाई पल्ट्याउँदा नेपालमा हालसम्म ८० भन्दा बढी विमान दुर्घटनामा परेका छन् । जसमा कैयौँ यात्रीको निधन भएको छ । विमान दुर्घटनाका विविध कारण छन् । मौसमको खराबी, चालकको बदमासी र विमानको अवस्था आदि नै हुन् ।
यद्यपि यसमा अन्य प्राविधिक त्रुटी पनि हुन सक्छन् । विमान दुर्घटनाका कारण यस्ता भएपनि हाम्रो नेपाली समाजमा यतिबेला मनगढन्ते कुराहरु भइरहेका सुनिन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यस्तो दुर्घटना भएको भनेर पनि कसैले ओलीप्रति नकरात्मक टिप्पणी गरेका छन् । यी टिप्पणीहरु साँच्चीकै बेतुकका छन् ।
प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपनि विमान दुर्घटनाको कारण प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । दुर्घटना भनेको आकस्मिक संयोग मात्रै हो । यस्ता अन्धविश्वास र कपोकल्पित विषयले नेपाली समाजको समेत धज्जी उडाइरहेको छ । त्यसो त अन्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि विमान दुर्घटना भएका छन् ।
हाम्रो समाजमा विवाह गरेको केही समयमै श्रीमानको निधन भयो भने उसकी पत्नीलाई श्रीमान टोकुुवा भनेर हेप्ने गरिन्छ । साथै ती नारीलाई अलच्छिना भनिन्छ । पतिको निधन दुर्घटना वा विभिन्न रोगको आक्रमणबाट हुन्छ भने त्यसको दोष उसको पत्नीलाई खन्याउनेहरु पनि छन् ।
वास्तवमा यिनीहरु समाजका कलंक नै हुन् । यिनले गर्दा समाज अझै तल भासिएको छ । सकरात्मक चिन्तनको कमीले नै यस्ता वाहियात कुरामा बकबक गरेका हुन्छन् । २०५६ असार २३ गते वुधबार लुफ्थान्सा एयरलाइनको विमान काठमाडौंको भष्मासुर डाँडामा दुर्घटना हुँदा, काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको सातौं दिन थियो । त्यो दिन विमानमा सवार पाँचै जनाको ज्यान गयो ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको हप्ता दिन नबित्दै विमान दुर्घटना भएपछि नेपाली समाजले उनलाई अलच्छिना प्रधानमन्त्री भन्यो । तर देउवा चार पल्ट प्रधानमन्त्री बने ।
पछिल्लो पल्ट गएको सोमबार काठमाडौंमै (त्रिभुवन विमानस्थल) ५१ जनाको ज्यान जानेगरी यूएस बंगला विमान दुर्घटना भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेको २५ दिनमा ।
ओलीले विमानस्थल पुगेर उद्दार कार्यलाई तिव्रता दिन नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । हालसम्म मुलकमा ८ पटक अन्तर्राष्ट्रिय, र आन्तरिकतर्फ ८० भन्दा बढी विमान दुर्घटना भए ।
नेपालमा विदेशी एयरलाइनका विमान दुर्घटनाको सुरुवात काँग्रेस नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दादेखि शुरु भएको हो । २०११ फागुन २५ मंगलबार बाराको सिमरामा कालिङ्गा एयरको विमान दुर्घटना भयो । २ जनाको ज्यान गयो । विमानमा सवार १ जना बँचे । यही थियो नेपालमा दुर्घटना भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमान ।
२०१३ जेठ २ मंगलबार इण्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौंमा दुर्घटना हुँदा १४ जनाको ज्यान गयो, १९ जना बाँचे । त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए नेपाल प्रजापरिषदका नेता टंक प्रसाद आचार्य । राष्ट्रप्रमुख थिए महेन्द्र । टंक प्रसादलाई हटाएर महेन्द्रले एकीकृत प्रजातान्त्रिक पार्टीका कुँवर इन्द्रजीत सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
उनको पालामा तेस्रो विदेशी विमान दुर्घटना भयो, २०१४ चैत ११ सोमबार, पात्लेभञ्ज्याङमा । त्यो दिन भएको इण्डियन एयरलाइन्सको दुर्घटनामा विमानका सबै २० जनाको ज्यान गयो । त्यसयता ३२ वर्षसम्म नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएन । २०४९ साउन १६ शुक्रबार नुवाकोटको घ्याङफेदीमा भएको थाइ एयरवेजको विमान दुर्घटना त्रासदीपूर्ण थियो । जहाँ, ११३ जनाको ज्यान गयो, प्रधानमन्त्री थिए, काँग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइराला ।
२०४९ कै असोज १२ सोमबार ललितपुरको भट्टेडाँडामा १ सय ६७ जनाको ज्यान जानेगरी पाकिस्तान एयरको विमान दुर्घटना भयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद नै थिए ।
त्यसको करीब १६ वर्षपछि नेपाली भूमीमा अर्को विदेशी विमान दुर्घटना भयो २०७१ फागुन २० बुधबार, त्रिभुवन विमानस्थलमा । टर्किस एयरको विमान धावन मार्गमै चिप्लिए पनि यात्रु हताहत भएनन्, प्रधानमन्त्री थिए, सुशिल कोइराला ।
त्यसो त नेपालको करीब ६० वर्षे (सन् १९९५८ जुलाइदेखि आर एनएसी, त्यसअघि नेपालको आफ्नै वायुसेवा थिएन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सन् १९५७ मा स्थापित) हवाइ यातायातको इतिहासमा पद्म शमरेश जंगबहादुर राणादेखि केपी ओलीसम्मको कार्यकालमा ८० भन्दा बढी विमान दुर्घटनामा परेका छन् ।
ती दुर्घनामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ८, देउवाको पालमा ४, सूर्य बहादुर थापा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल, सुशिल कोइराला र कीर्तिनीधि विष्टको पालामा ३ ३, बाबुराम भट्टराई र लाकेन्द्र बहादुर चन्दको पालामा २२ तथा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, तुलसी गिरी, सूवर्ण शमशेर, टंक प्रसाद आचार्य र मातृका प्रसाद कोइरालासहित वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा एकएक पल्ट विमान दुर्घटना भएका छन् (हेलिकोप्टर बाहेक) ।
सरकारको जिम्मेवार विमानस्थल सुरक्षित बनाउने हो । त्यसको लागि नीति नियम बनाउने हो । जिम्मेवार पक्षलाई अझ बढी जागरुक बनाउने हो । साथै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने हो ।
तर दुर्घटनाको कारण अलच्छिना सरकार भनेर टिप्पणी गर्नु ज्यादै तुच्छ टिप्पणी हो । त्यसो त केपी ओलीले पनि एउटा भाषणमा दिनदिनै गाडी दुर्घटना भएको छ । यो सरकार नै अलच्छिन भएको कुरा पनि चर्चामा आएको थियो । यो कुरामा पनि ओलीले निर्लज्ज टिप्पणी गरेको देखिन्छ । जसले गरेपनि यस्ता टिप्पणी गर्दा केही विचार पुर्याउनुपर्छ । (साभारः टिभी अन्नपूर्ण)
Previous Postक्यासिनोमा रमाउने निता ढुंगानाको झोलाभित्र भेटिए यस्ता चिज ,भन्छीन नेपाली होईन बीदेसी (हेर्नुहोस भीडीयो )
Next Postहिन्दीमा बोल्दा आलोचीत ऋषि धमला मीडीया सामु एसरी जंगीए ,मलाई जुन भाषा सहज लाग्छ तेही बोल्छु ( हेर्नुस भीडीयो सहीत )